के हो अण्डादान ? अण्डादानबाट कसरी जन्माउने बच्चा ? | Hamro Doctor News
बिहीबार, ८ असोज २०७७ /
उपचारका क्रममा चितवनमा मृत्यु भएका बाराका एक वृद्वमा काेराेना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं उपत्यकामा ७५५ कोरोना संक्रमित थपिए
बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा ७० वर्षीया संक्रमित महिलाको मृत्यु
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा खनालमा कोरोना पुष्टि
डडेल्धुरामा कोरोनाबाट मृत्यु भएका पुरुषको शव व्यवस्थापन, गाउँ सिल गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग
By Dr. Nutan Thakur Sharma
पुरुषबाट दान गरिएको विर्यबाट बच्चा जन्माउने पद्धति त नेपालमा धेरै पहिलेदेखि अभ्यास हुँदै आएको छ । तर अब महिलाले दान गरेको अण्डा वा एग डोनेशनबाट बच्चा जन्माउने क्रम पनि बढिरहेको छ । के हो एग डोनेशन ? यो कसरी गरिन्छ ? एग डोनेशन गर्ने र लिने महिलामा केही असर पर्छ वा पर्दैन ? भन्ने विषयमा बाँझोपन, ल्याप्रोस्कोपी, स्त्री तथा प्रसुतिरोग विशेषज्ञ डा. नुतन शर्माको भनाइ यस्तो छ ।
टेष्टट्युब बेबी वा आइभीएफमार्फत बच्चा जन्माउँदा, बच्चा जन्माउनयोग्य महिलाले अण्डा दिनु नै एग डोनेशन वा अण्डा दान हो । विशेषगरी बच्चा जन्माउने चाहना भएका तर आवश्यक अण्डा उत्पादन नभएका निःसन्तान महिलाका लागि यस्ता अण्डा आवश्यक हुन्छ । यसरी गरिन्छ एग डोनेशन जब कुनै महिलाले आइभीएफ वा टेस्टट्युब बेबीमार्फत शिशु जन्माउन चाहान्छिन् । उसलाई अण्डादान गर्न तयार महिलाको स्वास्थ परीक्षण गरिन्छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ रु अण्डा कतिको योग्य छ ? अण्डा लिने र दिने दुबैको शारीरिक अवस्था हेरी सबै कुरा उपयुक्त भए मात्रै आवश्यक उपकरणको सहायताले अण्डा निकालिन्छ र सम्बन्धित महिलाको श्रीमानको विर्यसँग मिलाई त्यही महिलाको पाठेघरमा राखिन्छ ।
नेपालमा अझै पनि एग डोनेशनलाई नकारात्मक रुपमा लिने प्रचलन रहेको पाइन्छ । एग डोनेशन गर्ने र लिने महिला समाजमा खुल्न हिच्किचाउने गरेको पाइन्छ । एग डोनेशन गर्ने महिलाको स्वास्थ्मा असर पर्ने, पछि बच्चा नहुने र यसरी जन्मिएका बच्चा पूर्ण स्वस्थ हुँदैनन् भन्न् भ्रम समाजमा रहेको छ । तर यो गलत हो । एग डोनेशनबाट जन्मने बच्चाहरू पनि अन्य समान्य जस्तैं हुन्छन् । स्वास्थ परीक्षण पश्चात उपयुक्त भए मात्र यस्तो अण्डा दिने र लिने भएकाले यसले कुनै असर गर्दैन् । नेपालमा एग डोनेशन बढ्दो विकसित राष्ट्रहरूमा एग डोनेशन निकै पहिलेदेखि प्रचलनमा छ । नेपालमा भने यसले भर्खरै चर्चा पाउन थालेको छ । यो निकै राम्रो कुरा हो । आफ्नो स्वास्थ्यका कारण बच्चा जन्माउन नसकेका महिलाले कसैको अण्डा लिएर बच्चा जन्माउन सक्छिन ।
अण्डा दिनेलाई पनि आर्थिक लगायत अन्य कुरामा सहयोग पुग्छ । एग डोनेशन गर्ने धेरैजसो कलेजका किशोरीहरू रहेको पाइन्छ । एक महिलाले कति पटकसम्म एग डोनेशन गर्न सक्छिन् एउटा स्वस्थ महिलाले स्वस्थ परीक्षण गर्दा उपयुक्त ठहरिए चारदेखि ६ महिनाको अन्तरमा जीवनभरमा ४ देखि ६ पटकसम्म एग डोनेशन गर्न सक्छिन् । छोटोछोटो समयमा धेरै पटक यस्तो गर्नु भने राम्रो हुँदैन् । कति पैसा लाग्छ एग डोनेशन गर्दा डोनर अनुसार पैसा फरक पर्छ होल । यो हामीसँग सम्बन्धित हुँदैन । यो अण्डा दान दिने र लिनेबीच हुने कुरा हो ।
Last modified on 2019-09-21 15:03:22
Samples Tested - ९,५५,९२३